ကိုယ်ချစ်ရသူကို အထူးခံစားရအောင် ဘယ်လိုလုပ်မလဲ? - Lifestyle Myanmar
ကိုယ်ချစ်ရသူကို ကိုယ်ဘယ်လောက်ချစ်ကြောင်းပြသဖို့ နည်းလမ်းများစွာ ရှိပါတယ်။ ဒါပေမယ့် တစ်ခါတစ်ရံမှာ သင်က သူတို့ကို ဘယ်လောက်တန်ဖိုးထားသလဲ? သင်က သူတို့အတွက် ဘယ်လိုထူးခြားသလဲဆိုတာ သူတို့ကို သိစေချင်မှာပါ။ ဒီတော့ သင်ချစ်ရသူကို အထူးခံစားရအောင် ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတာ ပြောပြပေးပါမယ်။
ပွေ့ဖက်ခြင်းက နွေးထွေးမှုကို ခံစားရစေပါတယ်။ ဒါ့အပြင် ချစ်ခြင်းမေတ္တာကြောင့် လုံခြုံမှု၊ ပံ့ပိုးပေးမှုနဲ့ ပျော်ရွှင်စေမှုကိုလည်း ခံစားရစေပါတယ်။ စိတ်ဖိစီးမှုတွေကို လျှော့ချပေးနိုင်ပါတယ်။ပျမ်းမျှအားဖြင့် ပုံမှန်ပွေ့ဖက်မှုကြာချိန်က ၃စက္ကန့်ခန့်ရှိသော်လည်း ကိုယ်ချစ်ရသူတွေကို ကြာကြာပွေ့ဖက်ပေးဖို့ မကြောက်ပါနဲ့။ အနည်းဆုံး စက္ကန့်၂၀လောက် ပွေ့ဖက်တဲ့အခါ အချစ်ဟော်မုန်းထွက်လာပါတယ်။ ဒါက သင်တို့နှစ်ယောက်လုံးကို တစ်ယောက်နဲ့ တစ်ယောက် ပိုမိုနီးကပ်စေပြီး သင့်ရဲ့ချစ်ခြင်းမေတ္တာကို ပြသရာရောက်ပါလိမ့်မယ်။
၂။ သူတို့ရဲ့ အကြံဉာဏ်ကို တောင်းပါ
သင့်ဘဝမှာ တစ်ခုခုက အနှောက်အယှက်ပေးနေရင် သင့်အတွက် အရေးပါတဲ့သူကို ပြဿနာတွေ ဖွင့်ပြောပါ။ သူတို့ရဲ့ ထင်မြင်ယူဆချက်ကို တောင်းပါ။ သူတို့ဆီက အကြံဉာဏ်တစ်ချို့ရယူပါ။ သူတို့က သင့်ရဲ့ကိစ္စတိုင်းကို မဖြေရှင်းပေးနိုင်ရင်တောင် သူတို့က သင့်ဘဝအတွက် အရေးကြီးတဲ့ အခန်းကဏ္ဍကနေ ပါဝင်ပြီး သင်ရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ချရာမှာ သြဇာသက်ရောက်မှုရှိတယ်ဆိုတာကို ပြသပါလိမ့်မယ်။
၃။ သူတို့နှစ်သက်တဲ့ အရာတွေကို တန်ဖိုးထားပါ
ဝါသနာတွေမှာ ပါဝင်ခြင်းက ကျွန်တော်တို့ကို အပန်းပြေဖို့၊ ကိုယ့်အတွက် အချိန်နည်းနည်းရဖို့၊ ပိုပျော်ရွှင်စေဖို့နှင့် လူတစ်ယောက်အဖြစ် တိုးတတ်စေခွင့်ပြုတဲ့ အချိန်တွေထဲက တစ်ခုပါပဲ။ သင့်မှာ မတူညီတဲ့ စိတ်ဆန္ဒရှိရင်တောင်မှ သင့်အိမ်ထောင်ဖက် နှစ်သက်တဲ့အရာတွေကို လေးစားမှုနဲ့ ထောက်ခံမှုပြဖို့ အရေးကြီးပါတယ်။ ကိုယ့်လက်တွဲဖော် ကြိုက်နှစ်သက်တဲ့အရာတွေအကြောင်း မေးခွန်းမေးတာမျိုး၊ အခေါ်အဝေါ်တစ်ချို့ကို လေ့လာတာမျိုး၊ လုပ်ငန်းစဉ်နဲ့ ပိုရင်းနှီးပေးတာမျိုးဖြင့် တတ်ကြွစွာ ပါဝင်နိုင်ပါတယ်။ ဒီနည်းအားဖြင့် ချစ်ခြင်းမေတ္တာကို ခံစားရစေပြီး သူတို့ရဲ့ self-worth ကိုမြှင့်တင်ပေးရာလည်း ရောက်ပါတယ်။ ဒါက တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက် သံယောဇဉ်ခိုင်မာဖို့ နည်းလမ်းကောင်းလည်း ဖြစ်ပါတယ်။
၄။ တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက် quality time ကိုဖန်တီးပါ
ဘယ်လောက်ကြာကြာ အတူနေခဲ့သည်ဖြစ်စေ၊ အရာအားလုံးကို သင်တို့နှစ်ယောက်နဲ့သာ သက်ဆိုင်တဲ့ အခိုက်အတန့်တစ်ခု ဖန်တီးတာက အမြဲကောင်းပါတယ်။ အိမ်မှာ ရိုမန့်တစ်ဆန်ဆန် ညစာ ပြင်ဆင်ပါ။ အတူတူ ပျော်ပွဲစားထွက်ပါ။ သူတို့အကြိုက်ဆုံးနေရာတွေကို သွားပါ။ (ဒါမှမဟုတ်) ညမှာကြယ်တွေကို ကြည့်ပါ။ သင်နဲ့ သင်ချစ်ရသူတို့ အကြိုက်ဆုံးဖြစ်မယ့်ရွေးချယ်မှုတစ်ခုကို ရွေးပါ။
၅။သူတို့ကို လုံခြုံမှု ခံစားစေပါ
အချစ်ရေးမှာ စိတ်လုံခြုံမှုက အရေးကြီးပါတယ်။ ဒါက သင့်လက်တွဲဖော်အား နားထောင်ပေးခဲ့တယ်၊ နားလည်ပေးခဲ့တယ်၊ တန်ဖိုးထားပေးခဲ့တယ်ဆိုတာကို မြင်သာစေပါတယ်။ သင့်ရဲ့အရေးပါသူတွေကို သူတို့ရဲ့ အားနည်းချက်တွေကို ပြသခွင့်၊ သူတို့ရဲ့ကြောက်စိတ်တွေကို ဝေမျှခွင့်ပေးခြင်းက သင်တို့အနှစ်ယောက်ကြား ခိုင်မာတဲ့ဆက်သွယ်မှုကို ဖန်တီးပါလိမ့်မယ်။ သူတို့နဲ့ ကိစ္စတွေ ဆွေးနွေးတဲ့အခါမျိုးမှာ တတ်တတ်ကြွကြွ နားထောင်ပါ။ ဝေဖန်အကဲဖြတ်တာမျိုး ရှောင်ပါ၊ ဂရုဏာတရားကို ကျင့်သုံးပါ။ ပြီးတော့ အပြုသဘောဆောင်တဲ့ တုံ့ပြန်ချက်တွေကို မမေ့ပါနဲ့။
၆။ အသေးအမွှားလေးတွေနဲ့ သူတို့ကို ပျော်ရွှင်အောင်ထားပါ
အပြုအမူအသေးအမွှားလေးတွေကနေတဆင့် သင့်ရဲ့ချစ်ခင်မှုကို ပြနိုင်ပါတယ်။ ဥပမာ- သင်ချစ်ရသူဆီကို တစ်နေ့လုံး ချစ်စရာကောင်းတဲ့ မက်ဆေ့ချ်တွေ ပို့ခြင်း၊ သူတို့အကြိုက်ဆုံး အစားအစာတွေ ပြုလုပ်ပေးခြင်း၊ အိမ်မှုကိစ္စတွေကို ခဏတဖြုတ် တာဝန်ယူပေးခြင်း ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
၇။ သူတို့ကို သင့်ရဲ့ဦးစားပေးဖြစ်စေပါ
တစ်ခါတစ်ရံမှာ လေ့လာမှုတွေ၊ အလုပ်တွေ၊ သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ မအားမလပ်ဖြစ်ပြီး သူ့ကို အချိန်မပေးနိုင်တာမျိုး ကြုံရနိုင်ပါတယ်။ သင့်လက်တွဲဖော်ကို သင့်ဘဝရဲ့ ရှု့ထောင့်တိုင်းမှာ ပါစေချင်တာကို ပြသဖို့ အရေးကြီးပါတယ်။ သူတို့ကို လျစ်လျူရှုထားတာမျိုး၊ သူတို့ခံစားချက်တွေကို ဂရုမစိုက်တာမျိုး မလုပ်ပါနဲံ။ ကိုယ့်သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ သွားတဲ့အခါမျိုးမှာ သူလိုက်သည်ဖြစ်စေ၊ မလိုက်သည်ဖြစ်စေ လိုက်မလား မေးပါ။
၈။ သူတို့ကို နေရာပေးပါ
လူတိုင်းက အားဖြည့်ဖို့၊ သူတို့ရဲ့ အတွေးတွေကို စုစည်းဖို့၊ စိတ်ဖိစီးမှုကို လျော့ချဖို့ ကိုယ်ရေးကိုယ်တာနေရာ လိုအပ်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် သင်ကိုယ်တိုင် တစ်ယောက်တည်းနေခြင်းကလည်း ပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေးမှာ လန်းဆန်းမှုအချို့ ယူဆောင်လာနိုင်ပြီး အချစ်တွေ ပိုခိုင်မာစေနိုင်ပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် သင့်ရဲ့လက်တွဲဖော်ကို သေချာဂရုစိုက်ပေးပြီး သူတို့ဘာသာသူတို့ တစ်ယောက်တည်းနေရမယ့်အချိန်ကို သိဖို့လိုအပ်ပါတယ်။